ဘီယာ ဘားတစ်ခုထဲသို့ လူတစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်ကျဟန်ဖြင့် ၀င်လာ၏။ စားပွဲထိုးမှ ဘာသောက်မလဲ မေး၏။
ဘီယာ လာချရင်း စားပွဲထိုးမှ ထိုသူအား
“ဆရာသမား၊ ဒီနေ့ တယ်မှိုင်ပါလားဗျ”
“မှိုင်ဆို ကျုပ်မိန်းမနဲ့ ကျုပ် အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဗျ။ သူက ကျုပ်ကို ပြောတယ်။ ရှင်နဲ့ ကျွန်မ တစ်လတိတိ မခေါ်ဘူးတဲ့”
“အဲဒီ တစ်လက ဒီနေ့ နောက်ဆုံးဗျ။ “
ဟာသထဲ ကဆရာသမားက မိန်းမ ကြောက်တယ်နဲ့တူတယ် LOL :P
by you is very constructive for
My web-site: website.kamsgraphics.com
Biography of U Ottama
AUTOCAD 2005/ 2007/ 2008 For Dummies!!!
Who Is Reponsible For This!!!!